ठाकुरलाई च्यालेन्ज गर्दा उपेन्द्र पछारिए | Pahara Nepal
19th June 2021 , 4:31 PM
काठमाडौं । कांग्रेस, माओवादी, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको लहलहैमा लागेर बहुमतको बलमा आफ्नै पार्टी फुटाउन तम्सिएका उपेन्द्र यादव पछारिएका छन् । बाबुरामसँग मिलेर फुटाएरै भए पनि पार्टी कब्जा गर्ने उपेन्द्र यादवको प्रयास पूर्ण रुपमा असफल भएको खुलेको छ । निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा अब जसपामा उपेन्द्र र बाबुरामको कुनै दाल गल्ने छैन ।
जसपाको आधिकारिता माग्दै बहुमत देखाएर बाबुराम र उपेन्द्र निर्वाचन आयोग पुगेका बेला आयोगबाट अर्को कागजात बाहिर आएको छ । जसमा सबै अधिकार प्रथम अध्यक्ष ठाकुरलाई रहेको पाइएको छ ।
ठाकुर पक्षले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै सहमतिबाट जसपाको कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर र पुनर्गठन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार ठाकुरलाई दिएको निर्णयसम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समिति बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि आयोगलाई बुझाएको हो ।
निर्णयको प्रतिलिपिअनुसार २०७७ पुस ७ गतेको कार्यकारिणी समिति बैठकको माइन्युटिङमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हेरफेर तथा पुनगर्ठन गर्ने अधिकार पार्टीको पहिलो वरीयताको अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
यसैगरी माइन्युटिङको २ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘बैठकबाट भएको निर्णय प्रमाणीकरण तथा पार्टीको आधिकारिक पत्राचारका लागि पहिलो वरीयताको अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।’ बैठकको माइन्युटिङमा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित ३८ जना कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षर छ ।
यो प्रमाण बाहिर आएपछि उपेन्द्र-बाबुराम समूहमा रुवाबासी भएको छ । ठाकुर पक्षलाई ठेगान लगाएर पार्टी कब्जा गर्न षडयन्त्र गर्दा आफै फसेको छ । आफ्नो षडयन्त्र असफल भएपछि उपेन्द्रले यसलाई जाली काम भनेर चोखिन खोजेका छन् । अहिले आएर ठाकुरलाई कुनै अधिकार नभएको भनिरहेका छन् । उपेन्द्र र बाबुरामलाई लागेको यो झट्काको असर विपक्षी गठबन्धनमा पनि पर्नेछ । जसपा महन्थ ठाकुरको पकडमा जाँदा अदालतमा परेको मुद्दामा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।
प्रथम ठाकुरले सोही अधिकार प्रयोग गरेर कार्यकारिणी समिति फेरबदल गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा पठाएको पत्रमा कार्यकारिणी समिति हेरफेरको जानकारी दिइएको छ । २०७८ जेठ ३ गते ठाकुरले उपेन्द्र यादव निकट २० जना कार्यकारिणी सदस्यलाई हटाई आफू निकटका २० जनालाई थप गरेका छन् । उक्त सूचीमा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. भट्टराई, अध्यक्ष यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईको नाम समावेश छ तर यादव निकटका अरू सबै नेताको नाम हटाइएको छ ।
यो कागजात ठाकुर पक्षले असार १ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हो । कार्यकारिणी फेरबदल गरेको १ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्रै आयोगमा बुझाइएको ठाकुर पक्षले जनाएको छ । यससँगै पार्टीमा स्पष्ट रुपमा ठाकुर समूह बहुमतमा पुगेको छ । उपेन्द्र र बाबुरामको पार्टी कब्जा गर्ने डिजाइन असफल भएको छ ।